Ahoana no hijoroanao irery: 9 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t! - Fifandraisana
Ahoana no hijoroanao irery
Ny fijoroana ho anao dia toy ny fihetsika miharihary izay ahalalanao hoe iza ianao, mametra fetra hoe iza ary inona no handefitrao, mifantina ny adinao ary aza manomboka ady.
Fa rehefa milaza ny marimaritra iraisana ankehitriny fa tsy maintsy 'mijoro amin'ny toeranao' ianao na 'manao izay hahatongavanao ho lehibe indray', manao ahoana ny fijoroana ho anao?
iray. Fantaro hoe iza ianao
Ho an'iza ianao? Raha tsy maintsy mamaritra ny tenanao ary ny toetranao anaty olona tsy fantatrao, mety hahatsapa hoe iza ianao?
Avy hatrany amin'ny ramanavy, zava-dehibe ny fahalalana fa ny hevitra dia tsy voatery hoe iza ianao. Voatarika hieritreritra fomba iray na amin'ny fomba hafa isika, ary noho ny angano an'ilay olona mikitoantoana dia vitantsika ny mandresy lahatra ny tenantsika fa antsika ny eritreritra.
Arovy ny anao, marina?
Afa-tsy, matetika, ny hevitsika manokana dia tsy mifanaraka tsara amin'ny tenantsika.
Tsy hadalana ve ny miatrika fazade?
Aleo kosa mihaino tsara. Misy boky, horonan-tsary ary tranokala mora azo hanombohana anao.
Ny fahatsiarovan-tena dia manampy amin'ny famotsorana ny tenantsika amin'ny Id mavitrika lalandava, ary amin'ny fanaovana izany dia ahafahantsika mahita - sy mankasitraka - hoe iza marina isika.
Rehefa mankasitraka ny tenanao ianao dia miaro ny anao tena , tsy kinova nopetahana anao.
2. Mametra fetra
Na manampy be toy inona aza ianao, dia hisy olona iray mieritreritra foana fa hainy mampijaly anao amin'ny fanaovana bebe kokoa, manome bebe kokoa ary bebe kokoa.
Ny fijoroana ho anao dia midika famerana fetra ka tsy kitapo fahantrana ianao, izay mety hiteraka kitapo fahatezerana.
Raha toa ianao ka karazan'asa avy any an-trano izay matetika manelingelina ny olona manontany raha tsy mampaninona anao ny mikarakara raharaha ho azy ireo (satria tsy eo am-piasana ianao '), ampahafantaro azy ireo ny ora fiasan'ny birao dia toy izany sy- izany dia hiasa mahagaga amin'ny fahasalaman'ny hazondamosinao.
Ampahafantaro ny olon-tianao izay tianao sy tsy tianao. Ampahafantaro ny namana izay misy sy tsy azo ekena.
Ny ankamaroan'ny olona ao amin'ny faribolanao dia hanaiky fa tsy voafetra ny fotoanao, ary tsy lany andro ny loharanonao.
Milaza tsia amin'ny hafa dia tsy mariky ny fitiavan-tena na fahalotoam-pitondrantena, fa na iza na iza manantena ny eny aminao amin'ny fotoana rehetra dia tena manondro zavatra tsy mahafinaritra.
3. Fanazarana, fanazarana, fanazaran-tena
Toy ny amin'ny zava-drehetra, arakaraka ny anaovanao azy no ahombiazanao amin'izany. Tsy misy hafa amin'izany ny mijoro ho anao.
Tena manampy mihitsy aza ny manomboka amin'ny loharano: ianao.
Ny mitsangana ho anao matetika dia midika hoe manao tango amin'ny tarehy eo amin'ny fitaratra. Ny mitsangana dia mety ho tsotra toy ny fanongilana ilay feo ratsy milaza hoe “Fa maninona no manelingelina?” rehefa faly sy mandrisika anao hanao fanovana tsara ianao.
Hihinana an'io voankazo io fa tsy ny bery gummy!
Eschew ny fitakiana tsy tapaka amin'ny media sosialy ho an'ny fahasambarana mangina amin'ny fotoana irery sy boky iray!
Ny fijoroana amin'ny tenanao dia manampy anao hijoro HO AN'NY ny tenanao.
4. Fantaro ny zonao
Satria tsy voafaritra ny famaritan'ny firenena ny zon'olombelona toy ny hoe lamaody lamaody (inona no ao, inona no mafana, inona ny couture!), Dia hanazava izany izahay amin'ny filazàna hoe 'Ny zon'olombelona.'
Manana ny zo hajaina . Fantaro izany.
Manan-jo hikarakara sy hitia ianao. Fantaro izany.
Manan-jo hanana fahatakarana sy fiaraha-miory.
Zonao ny tsy mahomby.
Manan-jo hahomby ianao.
Manan-jo hangina ianao.
Teraka tamin'ny zon'ny fahasambarana ianao.
Afaka nitohy hatrany izahay. Tsy misy manan-jo hitondra anao amin'ny fomba ratsy. Tsy misy olona manan-jo hanisy ratsy anao. Tsy tokony hisy olona mitady hitady, hanana, na hanao ambanin-javatra anao.
Olombelona isika, tsy misy amintsika olombelona hafa noho ny hafa. Tandremo ireo izay miaina ny fiainany toy ny hoe totohondry dia mari-boninahitra.
Ahoana ny fomba hialana amin'ny fahatsapana tsy fandriam-pahalemana sy hiatrehana ireo antony
Fomba marani-tsaina 5 hikarakarana olona madiodio izay manambany ny safidinao amin'ny fiainanao
5. Ianaro ny sandan'ny fahanginana
Fantatra ilay fomba fiteny taloha hoe 'Mitenena moramora ary mitondrà tehina lehibe'? Raiso lavitra kokoa io dingana io: mitenena malefaka - ary indraindray aza sanatria - ary mety hanaja sy hankafy ny fangejana ataonao ny olona.
Misy zavatra holazaina momba ilay mpiady tsy mitifitra, na ilay sensei izay tsy mamela ny sabany akory ny sabany, na ilay zazalahy mangina any am-pianarana izay tsy voaray mihitsy satria nankasitraka azy mangina ny olona rehefa nanao ny zavatra nataony.
Afaka nijoro ho an'ny tenany izy ireo nefa tsy nisy ezaka fanampiny satria tsy fantatry ny olona ny hampahatezitra azy ireo noho ny fahanginany.
Mety ho ianao koa izany.
Ny hijoro ho anao dia mety ho tsotra toy ny mijoro ara-bakiteny… mahitsy!
Ny fitenenana amin'ny vatana dia mitana andraikitra lehibe amin'ny safidin'ny olona hifandray amintsika. Famolahana, famoretana tanana, zara raha mifandray amin'ny hafa - izy rehetra dia mandray anjara amin'ny toe-javatra izay mety hitondrana anao amin'ny fomba iray ka mila mijoro amin'ny tenanao.
Ny zavatra tsara momba ny fitenin-tena dia valin-teny mahazatra fa tsy voahidy. Azonao atao ny mampiofana ny tenanao hiala amin'izy ireo mba hanehoana fahatokisan-tena bebe kokoa ary hanamafisana anao.
7. Fidio ny adinao
Araka ny voalaza tamin'ny fanokafana, ny fiainana dia mety ho toy ny antso an-kalalahana hiantsoana ireo miverina miady amin'ny ady. Ny tsirairay dia miady amin'ny ady taloha na an'ny olon-kafa.
Tsy ny fifampiraharahana rehetra akory no mahatonga ny herinao hiadian-kevitra. Ireo izay mahatsapa fa tsy maintsy miaro tsy an-kijanona ny tenany na ny toerana efa natorony azy ireo dia mety hieritreritra fa miziriziry izy ireo, raha ny tena izy dia izy ireo.
Aza adaladala. Aza mahatsapa fa ilaina ny mitsambikina amin'ny tongotrao, 'misaratsaraka, manome taratasy, manohitra, ary / na tratran'ny tratra amin'ny fotoana rehetra. Ho tonga amin'ny tsy fandriam-pahalemana ianao rehefa mieritreritra fa tsy mahomby amin'ny fomba mivantana rehefa mahatsapa fa nahazo isa manokana.
Ny fiarovan-tena dia tsy manintona, na manao ahoana na manao ahoana ny faniriany hiakanjo tena ho 'mijoro amin'ny' tenany.
Ratsy indroa ny manafintohina.
8. Manaova ny marina
Olona marina amin'ny ankapobeny dia manana fotoana mora kokoa hijoroana ho azy ireo satria tsy mandany hery sarobidy miaro ny endrika mivelatra.
Manisa amin'ny fifandraisana izany, manisa izany any am-piasana, eny fa na dia fihaonana sendra olona tsy fantatra aza ao amin'ny toeram-pivarotana enta-mavesatra.
Raha manao ny marina amin'ny zavatra inoanao ianao ary manakaiky an'izao tontolo izao, ny fijoroana ho anao dia resaka milaza XY fotsiny ary avelao ny hafa hanao an'izay tiany.
Tsy hahatsapa filana miketrika ianao hahatonga ny tenanao hahatsapa ho lehibe kokoa amin'ny firesahana olona iray mba hanaratsiana azy ireo na dia tsy hanamafy ny tenanao aza mba tsy hanararaotan'ny hafa anao.
Toy ny olona mangina dia ho hitanao fa eo ambanin'ny elo ataon'ny fahitsiana dia tsy manohitra tranga marobe ianao izay manapa-kevitra ny olona hampiasa ny hetahetany ho fomba iray handavoana anao.
9. Mitsako, Aza mitelina
Impiry ianao no nanaikitra ny lelanao fa tsy nilaza ny sainao? Tsy mahasalama izany amin'ny lafiny maro, fa ho an'ny tanjaky ny tena-tena, dia maharesy lahatra tena izany.
Raha ianao ilay karazana mitelina ny teninao fa tsy mitsako sy mandevona ny nofon'ny fifandraisan-davitra, makà fofonaina lalina, fantaro fa tsy misy zavatra mitombina aloaky ny vavanao fa mety hiharan'ny horohoro, ary hiteny.
Ny zavatra tavela izay tsy mbola nolazaina no laharam-pahamehana amin'ny fifandraisana ara-dalàna sy ara-dalàna, ao anatin'izany ny tsy fifanarahana.
Mitenena ary mijoroa amin'ny tenanao amin'ny fitadiavana fomba hitenenana izay ao an-tsainao izay mifanaraka indrindra aminao sy amin'ny zavatra ilainao.
Izany dia atao amin'ny fihainoana fa tsy ny fihenan'ny mandevon-kanina fa tsy ny fiezahana hihazona betsaka ka amin'ny farany - ary, matetika, toy ny tsy mahafinaritra - dia mivoaka toy ny bile am-bava sy ara-pientanam-po.
“Fa mihantona iray minitra,” reko mitomany ianao, ”hoy ianao teo aloha mba hamihina ny fahanginana. Iza izany? ”
Fanontaniana tsara. Eny, teo am-piandohana dia ny fampisehoana tanjaka fotsiny fa tsy tokony hanaovan-dratsy akory.
Eto dia midika hoe finiavana sy mahay miteny am-pahatsorana mba hampahalala amin'ny hafa ny fanirianao na ny hevitrao. Momba ny fahaizana mifandray amin'ny hafa amin'ny fomba mahomby mba hisorohana ny fikorontanana na tsy fahatakarana.
Ny fijoroana ho anao dia tsy tokony hatao Herculean. Raha ny marina dia tsy tokony ho izy, satria raha izany dia misy zavatra tsy mahomby amin'ny lalan'ny fiainanao.
Hisy foana ny fotoana sy ny olona izay mizaha toetra antsika olona izay miteraka fahalemena sy manafika.
Fa ny mahatsapa voalohany sy manan-danja indrindra fa tsy tokony hanananao mihoatra noho ianao vonona hanome dia fomba iray hanomezana voninahitra ny tenanao, ary hampihena be ny isan'ny fotoana mety hanenjehana anao.
rehefa mitady vady ny lehilahy
ny fomba hanombohana taratasim-pitiavana amin'ny zazavavy
maninona aho no mankaleo ny zavatra rehetra
inona no dikan'ny fitiavana tsy misy fepetra
maninona aho no tsy afaka mitomany na dia iriko aza
maninona izy no misintona tampoka